नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक, के के भयो निर्णय ? - नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक, के के भयो निर्णय ? -
नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक, के के भयो निर्णय ?
उज्यालो प्रतिनिधि ६ श्रावण २०७८, बुधबार उज्यालो फोकस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले आफ्ना नेताहरुलाई लक्षित गर्दै अर्को पक्षबाट भएको उत्तेजक गतिविधि र नारावाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै नेता गोकर्ण बिष्टले स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको बताए । एमाले भित्र देखापरेको असहज अवस्थाका बारेमा आपतकालीन छलफल भएको उनले बताए । उनले कार्यदलले तयार गरेको सहमतिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बिषयमा नै छलफल केन्द्रीत रहेको जानकारी दिए । आफुहरु एकताका लागि क्रियाशिल रहेको तर सर्वोच्चको फैसलाबिरुद्ध २२ जना सांसदमाथि स्पष्टिकरण सोधिएको उहाले बताए ।